हावाहुरी सहितको धुलो र घनघोर वर्षाले गल्कोट तथा बिहुँ क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित ! – ebaglung.com
हावाहुरी सहितको धुलो र घनघोर वर्षाले गल्कोट तथा बिहुँ क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित !
२०७६ बैशाख १८, बुधबार १६:२५	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
घनश्याम गौतम, गल्कोट २०७६ बैशाख १८ । केहि समय पहिले करीब सवा ३ बजोको समयमा गल्कोट क्षेत्रमा आएको भीषण हावाहुरी सहितको वर्षाले स्थानीयवासीको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । प्रलयको रुपमा चलेको हवाहुरीले गल्कोटका बस्तीहरुमा त्राहिमाम मच्चाएको स्थानीयले बताएका छन् । हावाहुरी र वर्षाबाट पुगेको क्षेती बारे यथार्थ विवरण आउन बाँकी रहेपनि गल्कोटमा चलेको हावा हुरी बतास सहित बर्षाले स्थानियको होसै उडाएको स्थानिय राजेन्द्र श्रेष्ठले ईबागलुङलाई जानकारी दिए ।
भीषण हावाहुरी र वर्षा सहित उडाएको धुलोले लोकमार्गमा सबारी चलाउन कठिन भएको चालकहरुले बताएका छन् । हुरी बतासले धुलो उडाउदा ब्यबसाय सञ्चालन गरेका पसेलेहरुले केही समयसम्म सटर बन्द गरेका थिए । हुरीबतास सहित अहिले हल्का बर्षा भैरहेको छ ।
नयाँ वर्षको पहिलो दिन बैशाख १ गते गल्कोटको दुदिलाभाटी, नरेठाँटी लगायतका भागहरुमा आएको बेमौसमी वर्षाले करोडौँको क्षती पुराएको पीडाबाट मुक्त भैनसकेका पीडीत गल्कोटवासीहरुलाई आजको हावाहुरीले नराम्ररी झझोलेको छ ।
यसैवीच काठेखोला गाउँपालिकाको विहुँमा पनि केहि समय देखी हावाहुरी चलेको छ । सहकर्मी भरत सापकोटाले दिएको जानकारी अनुसाु मानिसहरुलाई नै उडाउन सक्ने खालको हावाहुरीले बिहुँको जनजीवन त्रसित बनेको छ ।
काठेखोला गाउपालिकाको धम्जा तंग्राम बिहुँ भिमपोखरा लगाएत क्षेत्रमा बर्षा र हावाहुरी चरिरहेको स्थानीयले बताए ।
गल्कोट बागलुङ बिहुँ
बेनी-दर्बाङ सडक खण्डमा काम गर्ने कालुराम थारुको ढिस्कोले पुरिएर मृत्यु !